घर / ब्लग / बाथरूम पुन: निर्माण, G स्ट्रोक एक भव्य रूपान्तरण प्राप्त गर्न
2021 / 04 / 10 वर्गीकरणब्लग 1261 0
यदि हामीले घरको कुन क्षेत्र सब भन्दा जटिल र सबैभन्दा महँगो बनाउने भन्यौं भने, बाथरूम सम्भवतः पहिलो भान्छाको साथ बाँध्न सकिन्छ। बाथरूममा वरिष्ठताको भावना सिर्जना गर्न चाहानुहुन्छ, तर ठूलो सम्झौता गर्न चाहनुहुन्न, यो गर्न सजिलो र सजिलो तरीका के हो? यस मुद्दामा हामी बाथरूम सजावटमा विशेषज्ञ छौं, फ्रीस्टेन्डिंग बाथटबहरू, मार्बल वैनिटीहरू र एन्टिक भ्यानिटी मिररहरू बिना नै हामी पनि बाथरूमको ठाउँ अपग्रेड गर्न यी पाँचवटा सानो तरिकाहरू प्रयोग गर्न सक्छौं।
अझै साबुनको लागि कुरूप प्लास्टिक साबुन बक्स प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ? तपाइँको मार्गहरूमा यत्तिको सेट नहुनुहोस्। ती सस्तो र कच्चा मिल्दो भाँडाहरूलाई खारेज गर्न सकिन्छ र सबै राम्रो देखिने कन्टेनरहरूको आफ्नै संग्रहको साथ प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ।
कपास swabs र कपास बलहरूका लागि राम्रो गिलास जारहरू, र साबुनको लागि नाजुक सानो भाँडा पनि धेरै उपयुक्त हुन्छन्। सबै भन्दा उत्तम, ती सबै एक भण्डारण ट्रे मा प्याक गर्नुहोस् र तपाईंको घमण्ड धेरै tidier हुनेछ। ▼
स्क्रब ब्रशेस वा नुहाउने बलहरू भण्डार गर्न सानो ढु stone्गा मोर्टार प्रयोग गर्नुहोस्। ▼
ठूला कचौरा र साना प्लेटहरू राम्रो प्रयोगको लागि राख्न सकिन्छ। ▼
यदि तपाईं पूरै घर भिजाउन चाहनुहुन्न भने, नन पर्ची बाथरूम चटाई आवश्यक छ, किनकि सफा र ताजापन मूल कुरा हो। यदि तपाईं आफ्नो बाथरूमलाई अझ सुन्दर बनाउन चाहनुहुन्छ भने, तपाईं एक राम्रो रगको साथ नन-स्लिप मैटको भूमिका बदल्न सक्नुहुन्छ। ▼
चिन्ता छ कि कार्पेट सधैं गीला र सजिलो मोल्ड र फफूंदी को लागी सजीलो छ? त्यसपछि सुख्खाबाट भिजेको अलग गर्ने राम्रो काम गर्नुहोस्, र त्यसपछि यसलाई धोएर नियमित रूपमा परिवर्तन गर्नुहोस्! ▼
बाथरूम भ्यानिटी मिरर महत्त्वपूर्ण चीजहरू हुन् जुन बनावट प्रतिबिम्बित गर्दछ। यदि ऐना एकदम पातलो छ भने, यसले भाँडाको घरको भावना प्राप्त गर्नेछ। त्यसकारण, बोर्डरको साथ सुरुचिपूर्ण ड्रेसिंग मिरर चयन गर्न आवश्यक छ।
यद्यपि सि the्क एकदम सरल छ, तर भिन्टेज यूरोपियन शैलीको ड्रेसिंग मिररको साथ, सम्पूर्ण ठाउँ क्वालिटीको भावमा परिणत भएको छ। ▼
सरल र उदार आयताकार मिरर काठको फ्रेमको साथ, फ्रेमको मूल काठ र color र शुद्ध सेतो पृष्ठभूमि रंगले एक अर्कालाई अत्यन्तै रमणीय ढंगले पूरक बनाउँछ। ▼
यदि तपाईं उपयुक्त मिरर किन्न सक्नुहुन्न भने, तपाईं स्ट्रॉ डोरीको साथ फ्रेम फ्रेम गर्न चाहानुहुन्छ। ▼
सुन वा पीतल कुलीन हो र भव्यताको भावनालाई अझ प्रभावकारिता वृद्धि गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ। चम्किला चमकदार सुनको साथ हल्का पृष्ठभूमि महान र महिला देखिन्छन्, जबकि भारी गाढा सुनको साथ कालो पृष्ठभूमि मर्यादित र वायुमंडलीय हो। बाथरूम हार्डवेयर र ऐना फ्रेमहरू सुनको लागि सबैभन्दा उपयुक्त छन्, प्रासंगिक एकल उत्पाद पनि खरीद गर्न अपेक्षाकृत सजिलो छ।
शुद्ध सेतो पृष्ठभूमिमा, चम्किला सुनको एक स्पर्श धेरै आँखा लाग्ने छ। जहाँसम्म, ठाउँ अन्धकार छ भने, बहुत साधारण चमकदार सुनका आइटमहरू पृष्ठभूमिमा सजीलै हराउनेछ। ▼
जब अन्तरिक्ष पृष्ठभूमि अँध्यारो वा हल्का र गाढा मध्यवर्ती हुन्छ, केही भारी सुन छान्दा थप बनावट देखिने छ। एकै समयमा, अधिक गतिको साथ सुन आइटमहरूको सेट, तर पनि पृष्ठभूमिबाट पदानुक्रमको भावना को गठन जोड्न। ▼
धेरै परिवारहरूले बाथरूमको प्रकाशको विकल्पलाई बेवास्ता गर्छन्। ओभरहेड बत्तीको सट्टा स्नान बार प्रयोग गर्नुहोस्, वा भ्यानिटी क्याबिनेट यसको आफ्नै प्रकाश स्रोतको साथ पर्खाल बत्तीको सट्टा प्रयोग गर्नुहोस्, पर्फन्टक्टरी होइन। ठाउँको उन्नत बोध विस्तारको ध्यानबाट आउँदछ, राम्रो देखिने बत्तीहरू र लालटेनहरू बढाउने क्वालिटीले ल्याएको हो, निश्चित रूपमा सोच्न लायकको छ।
एक मुख्य प्रकाश + धेरै साना बत्तीहरू, एक आकर्षक वातावरण सिर्जना गर्न धेरै प्रकाश स्रोतहरू। ▼
ज्यामितीय पॉलिहेड्रन आकारको छत बत्ती ठाडो र ज्यादै जटिल छैन। ▼
यदि तपाइँको बाथरूम पर्याप्त ठूलो छ भने, एक भव्य झूमर छान्नुहोस्, जटिल बान्कीका साथ एक ठूलो झूमर, र तुरन्त कल्पनाको भावना सिर्जना गर्न पक्षी र फूलहरूसँग वालपेपरलाई मिलाउनुहोस्। ▼
पातलो र रमणीय भित्ता बत्तीहरू। ▼
यदि तपाईं चार पर्खाल को सरलता बर्बाद गर्न चाहनुहुन्न भने, तपाईं भित्ता बत्तीको सट्टा सानो झूमर प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। ▼
नुहाउने पनि आराम हो, र धेरै प्रकाशले मानिसलाई पनि ब्यूँझाउछ। यदि तपाईं ढिलो गतिमा आराम गर्न चाहनुहुन्छ भने, एक बत्ती बत्ती जलाउनुहोस् र रोमान्टिक निजी स्नानको समयको आनन्द लिनुहोस्। ▼
अघिल्लो :: बाथरूमको "उच्च मूल्य", अति आश्चर्यजनक, तपाईको दिमागमा आदर्श प्रकार छ? अर्को: कसरी वाथरूम क्षेत्र अधिक व्यावहारिक स्थापना गर्ने? यो चार पक्षबाट सुरू गर्नुहोस्, त्यो राम्रो देखिने र राम्रो प्रयोग सुनिश्चित गर्न!
2021 / 05 / 28 1581